Showing posts with the label वाटिका
बिहेमा को–को थिए ?
मुकुन्द आचार्य विवाह शब्द नै खिइएर बिहे बन्न गएको हो। छोटकरीमा भन्नुपर्दा, जिब्रोको सजिलोका लागि अङ्ग्रेजीको ‘ब्रदर’ ब्रो भयो, युनाइटेड किङ्गडम युके भयो, युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका ‘युएसए’ बन्न पुग्यो, मार्केट–मार्ट भयो, मदरबाट मम भयो। मान्छे सा–है छोटो हुँदै गयो। त्यसैले अचेल बिहेवारी पनि छोटकरीरूपमा हुन थाल्यो। त्यसो त हाम्रो हिन्दू समाजमा चट मँगनी पट शादीको चलन पहिलेदेखि नै नभॉको त हैन। शुभस्य शीघ्रम भनिने टुक्काले पनि चटपट बिहे गरिहाल्नेलाई रौस्याएकै हो नि त। अनि त आइहाल्यो नि ‘मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी !’ आँखा मात्र जुध्नुपर्छ अनि त धेरै थोक जुध्न थाल्छन्। म पनि हालसालै एक मित्रको छोराको बिहेमा साक्षी किनाराको सदर बन्दै जन्त भएर गॉको थिएँ। पाए अन्त नपाए लखनेको जन्त भन्ने आहानलाई चरितार्थ गर्दै म जन्त भएर दक्षिणकालीको सुरम्य शक्तिपीठमा दाखिल हुन पुगें। हुलमुलमा जीउ जोगाउनू भन्छन्। मातालाई टाढैबाट ढोग गरें। जन्तीमा विविधखाले मानव आकृतिका जीवजन्तुहरू हुनु स्वाभाविकै हो। जन्त हिंड्नुअघि नै यौटा धक्कुबाजले गुड्डी हाँक्यो– म त खाँटी काङ्ग्रेसी ! मेरा बाजेले वि
उमाशङ्कर द्विवेदी ऊ एक्लो र असहाय भएपछि दुःशासनको पुत्रले सङ्कटापन्न अवस्थामा उसलाइ मारिदियो। उसले पहिले एक हजार हात्ती, घोडा, रथी र मानिसहरूलाइ मा–यो, फेरि आठ हजार रथी र नौ सय हात्तीको संहार ग–यो, तत्पश्चात् दुई हजार राजकुमार तथा अन्य धेरै सारो अज्ञात वीरलाई मारेर राजा बृहद्वललाई पनि यमलोक पठायो, त्यसपछि मात्र ऊ बल्ल स्वयम् म–यो। यही हाम्रोलागि सबैभन्दा बढ्ता शोकको कारण हो। धर्मराजको कुरा सुनेर अर्जुनले पुत्र, पुत्र भन्दै उच्छ्वास लिन थाले र व्यथाबाट अत्यन्त पीडित भई पृथ्वीमाथि ढलिहाले। त्यति बेला सबैको मुखमा विषाद देखियो तथा जम्मैले अर्जुनलाई चारैतिरबाट घेरेर निर्निमेष नेत्रबाट एकअर्कालाई हेर्न थाले। अलिक बेरमा अर्जुन चैतन्य भएर क्रोधित भई भने– म तपाईंहरूको सामु यो साँचो प्रतिज्ञा गरिरहेको छु कि यदि जयद्रथले कौरवहरूको आश्रय त्यागी भागेर गएन अथवा हाम्रो वा भगवान् श्रीकृष्णको अथवा युधिष्ठिरको शरणमा आएन भने भोलि म उसलाई अवश्य नै मार्नेछु। कौरवहरूको प्रिय गर्ने पापी जयद्रथ नै त्यस बालकको वधको निमित्त बनेको थियो, अतः निश्चय नै भोलि उसलाई यमलोक पठाउनेछु। भोलि उसलाई मार्न नसकेमा मात
मुकुन्द आचार्य हाम्रँे सानो देशमा धेरै थरीका भाषाभेष छन् । एकजना त भेषबहादुर थापा थिए, धेरैलाई सम्झना होला । भेषभाषा आदिको भिन्नताले नै त देश रमाइलो, घमाइलो हुँदो रै‘छ । तसर्थ नेपालको तराई भेगमा पनि भोजपुरी, मैथिली, अवधी, थारू, राजवंशी आदि भाषाको राम्रँे उपस्थिति छ । भोजपुरी भाषाको लोकगीतको यो सर्वप्रसिद्ध त्रबोल हो । कोइलीले कुहु–कुहु गर्दा कतिलाई रोमाञ्च हुन्छ रे ! वसन्त ऋतुदेखि कोइलीले पनि मिलनको गीत गाउन थाल्छ भन्ने प्रचलन रहिआएको छ । कुनै पुस्तक पढेको जस्तो लाग्छः वसन्त ऋतु आएको बेला कोइली र कविलाई पहिले थाहा हुन्छ रे । वसन्त आउनासाथ कता हो कता लुकीबसेको कोइली पञ्चम स्वरमा गाउने र कविले पनि ताली बजाएर सुसेलेर उसैको तालमा नाच्ने गाउने गर्छ भन्ने मान्यता हामीले पालिरहेका छौं । कवि, कोइली र वसन्त ऋतुको एक्का ट्रायल नामी र दामी मानिन्छ । हाम्रँ पूर्वीय शास्त्रीय वर्णनहरूमा वसन्त ऋतुको शुभागमनको निहुँमा वसन्तोत्सव धूमधामले मनाउने प्रचलन रहिआएको थियो । राजा रजौटाहरू आफूलाई इन्द्र र दरबारिया स्त्रीलिङ्गहरूलाई अप्सरा मानेर निकै उल्लासका साथ जिस्किने, मस्किने, ठुस्किने, लट्ठिने गर्थे रे ।
सञ्जय मित्र रौतहटको गुजरा नगरपालिकाको चोंचामा रहेको गुजरा फन पार्क गन्तव्य हो । गरूडाबाट निस्केर झन्डै सोझो हुने नहर नसमात्दासम्म अनगिन्ती मोडहरूको ग्रामीण बाटो गुड्दा अलिकति पनि लाग्दैनथ्यो कि नगरपालिकाको बाटो पनि यस्तो हुन्छ । धूलो र माटोका सडकहरू नाघ्दै अगाडि बढ्दैछौं । एउटा मोडमा मैले स्कूटर रोकेर देखाउँछु– “ऊ... त्यो अलिकति माटो भत्केको र खाल्डो परेको ठाउँ छ, त्यहाँ नै लमाहा नदीमा नहर मिलाइएको छ। नहरलाई खोलामा मिलाइएको हो । अधिकांश ठाउँमा नहर खोलाबाट निकालिन्छ तर यहाँ नहरलाई खोलामा मिसाइएको छ । हो, यो नहर जहाँबाट वाग्मती मूल नहरबाट छुट्याइएको छ, हामी त्यहाँ पुग्दछौं अहिले । मैले देखाउनुपर्ने कारण यहीं हो ।” अनि हुइँकिन्छौं । साथीहरू अगाडि बढिसकेका छन् । नजीकै एउटा मोड छ । मोडले त्यहीं नहरको किनारमा पु¥याउँछ, जसलाई नजीकैको खोलामा विसर्जन गरिएको छ। त्यहाँ अलिक पर खोला देखिन्छ र नहरलाई खोलामा विसर्जन गरिएको ठाउँको विपरीत दिशामा विशाल सरेह छ । धरतीको मुहारलाई नयाँ बालीले हरियो बनाएको छ । त्यहीं एकातिर धरतीको अनुहार मलीन देखिन्छ भने अर्कोतिर उज्यालो । नाकको डेडीजस्तो नहर छ, जसले त्यहाँ
मुकुन्द आचार्य आजको सुपरफास्ट युगमा यो अन्तरजातीय बिहे कुनै समस्या नै होइन भन्ने र मान्नेहरूको सङ्ख्या विश्वमा कोरोनाझैं ह्वात्तै बढेको छ। यसो एक निमिष गम्दा ‘ए हो त... नि १’ भन्ने पनि थुप्रै होलान्। युग फेरियो फेशन फेरियो, हेर्ने चश्मा फेरियो, फरिया फेरिएर टाइट पैन्ट लाउन थाले। निकै टिमिक्क परेर हिंड्नेहरूका नाभी मुन्तिरका अङ्ग–प्रत्यङ्ग प्रस्टै परिलक्षित हुन थाले। स्मार्टनेस हो रे...१ बरु दिगम्बरे भएको राम्रो, वस्त्र खर्च बाँच्छ १ त्यसैगरी, सारा समाजका आधारस्तम्भ नै हल्लिए, मर्किए, भाँचिए, ढले, गले, माटोमा मिले। तर यो अवस्था हामीले प्रयास गरेर क्रान्ति गरेर ल्याएको चै हैन। तैपनि के चै ठोकुवा भन्न सकिन्छ भने यो ओभर स्मार्टेस चै हाम्रो शिक्षा पद्धति र पश्चिमा देशको अन्धो नकलको ठूलो देन हो। मान्छे चन्द्रलोकमा बोरामा टन्न ढुङ्गा हालेर मत्र्यलोकमा ल्याएर अनुसन्धान अन्वेषण गरिरहेको युगमा यो अन्तरजातीय बिहेको कुरा उठाउनु सङ्कुचित मानसिकता हो भन्दै ओठ लेप्रयाउनेहरू पनि टन्ने होलान्। तर विगतको भूतले पनि हामीलाई चटक्कै त कहाँ छोड्छ र १ ह्याङओभर त रहिरहन्छ। प्रजातन्त्रको जन्मदाता मानिने ब्रिटेन